Aagga Deegaanka - Hengyi Electrical Co., Ltd.
TV -yada, qaboojiyaha, qaboojiyaha, armaajooyinka jeermiska dila, makiinadaha dhaqa, foornada microwave -ka iyo sidoo kale alaabta elektaroonigga ah ee kombiyuutarka. Heerarka nolosha ee sii kordhaya, isticmaalka korontada ee dadka deggan ayaa aad kor ugu kacay. Gaar ahaan xilliga ugu sarreeya xagaaga, culayska inductive deggenaasha ayaa si aad ah kor ugu kaca, iyo xilliga firfircoonida loo baahan yahay ayaa aad u kordheysa.
Xalka la qaatay:
Marka la eego maqnaanshaha is -waafajinta ee bulshada ama waxyaabaha yar -yar ee is -waafajinta (THDi≤20%), Ku -rakibidda awoodda wax -qabad ee korantada awoodda hoose ee caqliga leh waa in lagu dhejiyaa qolka qaybinta awoodda korantada ee hoose ee bulshada si loo helo magdhowga awoodda firfircoon (xalka 1) .
Jiritaanka iswaafajinta bulshada dhexdeeda laakiin aan ka badnayn heerka (THDi≤40%), ku rakibidda caqli-galinta isku-dhafan ee ka-hortagga harmonic awoodda korantada ee korantada ee qolka qaybinta korantada hoose ee bulshada ee magdhowga awoodda firfircoon (xalka 2).